नेकपा कार्यदल : दिइएको समय ‘फासफुस’, विवाद ज्यूँका त्यूँ
२o७५ माघ ३ बिहीबार| प्रकाशित ११:o६:oo
काठमाडौं– पुस महिनामा दिन छोटो र रात लामो हुने तथा दिनहरु चाँडै कट्ने अर्थमा चोटिलो पारामा भनिने नेपाली उखान छ–पुस फासफुस।
पुुुसमै सम्पन्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले पुसभित्रै सक्नेगरी पार्टी संगठनात्मक एकताको मोडालिटी तयार पार्न एउटा कार्यदल बनायो। तर, कार्यदलको काम उखानजस्तै ‘फासफुस’ हुनपुग्यो।
पुस १३ मा सम्पन्न नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले तल्ला र प्रदेश कमिटी गठनको विवाद, विधानमा देखिएका विवाद लगायतको विषयमा छलफल गरी प्रस्ताव पेस गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदलमा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरु शंकर पोखरेल, रघुविर महासेठ, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टाराई, सुरेन्द्र पाण्डे र वेदुराम भुसाल थिए।
पुुस मसान्तसम्म काम सक्नेगरी म्याण्डेट पाएको कार्यदल संयोजकको जिम्मा गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापालाई दिइएको थियो। तर, समयसीमा भने गत सोमबार नै गुज्रिसकेको छ। अन्ततः दिइएको १७ दिनमा कार्यदलले के काम गर्‍यो त?
कार्यदल सदस्यहरुको जवाफ सुन्दा पुसको समय काम नै नभई फासफुस सकिएको प्रतित हुन्छ। कार्यलदका एक सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘चार/पाँच दिनदेखि बैठक बसेको छैन। सहमति नै केही भएको छैन, अध्यक्षलाई के प्रदिवेदन बुझाउनु?’
त्यसमाथि के–कति काम भयो र के–के बाँकी छन् भन्नेबारे कार्यलदका सदस्यहरु खुलेर बोल्न चाँहदैनन्। सबै काम नटुंग्याउँदासम्म बाहिर नबोल्ने सहमति कार्यलदमा भएकोले आफूहरु बोल्न नमिल्ने उनीहरु बताउँछन्।
यसबीचमा कार्यदलका अर्का सदस्य लेखराज भट्टका अनुसार संयोजक थापा र पार्टी महासचिवसमेत रहेका सदस्य विष्णु पौडेल अहिलेसम्म भएका काम र विवादबारे जानकारी दिन नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका थिए। तर, सो भेटमा के–के भयो, आफूलाई थाहा नभएको भट्ट बताउँछन्। ‘उहाँहरु सहमति जुटेका विषयहरु लिएर अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न जानुभएको थियो,’ उनले भने, ‘म तीन दिनदेखि बाहिर थिएँ, के भयो मलाई जानकारी भएन।’
स्रोतका अनुसार कार्यदलले प्रदेश कमिटीको विषयबाट काम थालेको थियो। प्रदेश कमिटिका विषयमै कार्यदल सदस्यहरुबीच विवाद भएपछि कार्यदल संयोजक थापा र सदस्य पौडेल अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न गएका थिए। ओलीले प्रदेश कमिटिलाई अहिले नचलाउने इच्छा व्यक्त गरेपछि कार्यदलमा अहिले काम रोकिएको स्रोत बताउँछ।
प्रदेश पदाधिकारी चयनसम्बन्धी सचिवालयको निर्णयमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिलेदेखि असहमति राख्दै आएका छन्। नेता नेपाल र श्रेष्ठ विदेशमा रहेका बेला बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशमा इञ्चार्ज र अध्यक्ष तोकेको थियो। सो निर्णयमा आफ्नो समूहका मान्छे नपरेपछि उनीहरु असन्तुष्ट रहँदै आएको बताइन्छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेश कमिटी इञ्चार्जसमेतको दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै त्यसप्रति पनि नेता नेपाल पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ।
के हुन्छ कार्यदलको भविष्य?
पार्टी एकता गर्दा नै नेकपाले तीन महिनाभित्र सबै तहको एकता गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो। तोकिएको समयमा भने काम हुन सकेन। पछिल्लो पटक पुस मसान्तसम्म एकताको काम टुंग्याइसक्ने लक्ष्यसहित कार्यदललाई समय दिइएको थियो।
एउटा पनि विवाद नटुंग्याई कार्यदलको समय सकिएपछि अब के गर्ने भन्नेबारे अलमल बढेको छ। पछिल्लो चार/पाँच दिनदेखि कार्यदलको बैठक बस्न सकेको छैन। कार्यदलका सदस्यहरुबीच देखिएको अलमलका कारण नभई यो बीचमा माघी लगायतका पर्व परेकाले बैठक बस्न नसकेको नेताहरुले बताएका छन्।
कार्यदलका अर्का सदस्य योगेश भट्टराई भने पुस मसान्तसम्म काम गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यदलको समय किटान नगरिएको बताउँछन्। उनी अब नियमित बैठक बसेर काम सिध्याउने पक्षमा छन्। ‘हामीहरु नियमित बैठक बस्न नपाएकाले काम नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘अब नियमित बैठक बसेर एकीकरणको काम चाँडै सकाउँछौं।’
माघभित्र कार्यदलले सबै विवाद मिलाउने र फागुनमा एकीकरणको काम पनि सकिने दाबी उनको छ। ‘खासै विवाद केही छैन। बिस्तारै विवादका विषय पनि मिल्दै जान्छन्,’ भट्टराईले भने।